Iwe uri muteveri wechokwadi weHinduism here? Kutsvaga nzvimbo yechitendero inofanirwa kushanyirwa munguva yehupenyu hwako, wedzera Jagannath Rath Yatra 2019 kunyore yako! Zvakanaka, Puri Rath Yatra zvirokwazvo chimwe chinhu chinofanira kutorwa kamwe chete munguva yehupenyu.
SandPebbles inopa zvinoshamisa mapaji Jagannath Rath Yatra kuitira kuti iwe uwane rwendo rwusina hanya nekugara munguva dzekufambisa dzeguta. Kunyangwe iwe uchida kufamba kubva kuBhubaneswar kana kugara muguta munguva yePuri Rath Yatra, tinogadzirira zvose kubva pakutsvaga hotele kutasva, kufamba, uye zvose, kuita kuti rwendo rwenyu rwekudenga rurege kukanganwa. Our Jagannath Rath Yatra 2019 purogiramu inosanganisira:
Zuva 1: Kusvika Bhubaneswar
Mumwe wevamiririri vedu vachakugamuchira pa Biju Patnaik International Airport, Bhubaneswar uye anokuendesa kuhotera. Kana iyo ndege ichiuya mangwanani, unogona kushanyira Smart City kana kuti unogona kuenda kuPuri, inongova 60 Km drive kubva muguta. Kudya kuchagoverwa muhotera.
Zuva 2: Shanyira Jagannath Temple
Mushure mekudya kwekudya kwemafuro kusvika kuPuri pane imwe nzvimbo yakajeka uye inovaraidza. En-route kushanyira Dhauli, Ashokan Rock Edict uye Shanti Stupa, Pipili, Applique Work Village, Sakhigopal, iyo Radha Krishna Temple & Raghurajpur, iyo Painting Village. Mushure mekusvika paPuri, tarisai kuhotera. Manheru anovashanyira kuna Ishe Jagannath Temple kuti vatore muhupenyu hweAalati Darshan. Mushure meizvozvo, dzokera kuimba yehotera kuti udye neusiku husiku.
Zuva 3: Rath Yatra
Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwePuri Badadanda. Chirongwa chakakosha chingave chakaitwa padenga rehotera kuitira kutarisa Rath Yatra. Kana iwe uchida kuona Rath Yatra kubva padenga repamusoro, tapota famba mangwanani. Ndapota cherechedza kuti Breakfast packet, mvura yewaini, inotakura masikati ichapiwa iwe. Mamwe manheru iwe uchange udzoka kuImbai kuti udye uye kurara kunorara.
Zuva 4: Kutarisa Puri
Mushure memangwanani emangwanani, gadzirira kugona kuona. Mushanyira Narendra Pokhari, Lokanath Temple, Markandeshwar Temple, Lakshmi Temple, Ganesh Temple, Gundicha Temple, Swargadwar, Raghurajpur Artist Village, Bimala Temple & many more. Dzokera kuhotera kuti udye neusiku hwakanaka.
Zuva 5: Puri Beach Inofadza
Iwe unofara pamhenderekedzo. Nzvimbo yevashanyi vanofambisa, vanouya kuzotora tsvina yekuchenesa. Imwe yemhenderekedzo dzakanaka kupfuura dzose muIndia, umo mvura inoputika yeBay yeBengal inonamatira kunaka kwayo. Iwe unogona kunakidzwa nemafungu anononoka agere pamberi pegungwa ane kunakidzwa kwechando chekizi uye zvimwe zvinhu zvekudya kana kuenda kune motokari refu kuenda kuPuri-Konark Marine Drive mumugwagwa.
Zuva 6: Kutenga paPuri
Shamba kusvikira mwoyo wako uchinge wadonha. Mumwe haagoni kukanganisa mashandiro anowanikwa pasi pePuri. Tsvaga michero ye sirivha uye uchatenga Sambalpuri uye Bomkai vanocheka vachakugadzirisa nebasa ravo rakaoma.
Zuva 7: Drive kune Konark
Dharira ku Konark, uchinakidzwa nemaonero anoshamisa ePuri-Konark Marine Drive. Kunze kwekupinda muRatha Yatra Mutambo, vafambi vePuri vanogona kutarisa zvimwe zvingasarudzwa zvevashanyi. Puri Beach, Konark Beach, Konark Sun Temple mamwe emakwikwi anoyevedza anoshanyira nzvimbo dzakapoteredza Puri. Mushure mekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwekudya kwaKonark Sun Temple, ASI Museum (Yakasimbwa neChishanu), Ramchandi Temple & Chandrabhaga Beach. Mumazuva masikati, fara pagodi yegungwa uye ugare pamhenderekedzo yegungwa yePuri. Iwe uchange uine husiku husiku hwose paPuri.
Zuva 8: Kubva
Mushure mokudya kwekudya chamangwanani, iwe uchaenda panguva yakakodzera kuBhubaneswar Airport kana motokari yechitima kuti uende rwendo.
Kudya neKudya Kokudya
Zvose zvinoshandiswa neC AC oga
Puri-Konark Marine Drive inoshanya (Gara mumotokari yepamusoro kana kuti makosi)
Puri Sightseeing tour + Jagannath Temple + Konark (Gara mumotokari yepamusoro kana kuti makosi)
Kunyangwe iwe uchitaura pamusoro pezvakaitika matemberi, zvivako, nzvimbo dzemazuva ezvikara, mhemberero, nzvimbo dzakanaka, tsika kana chikafu - bounty yenyika haina kufanana zvachose. Uye, yeJagannath tsika ine chimwe chinhu, izvo zvinoita kuti maIndia ose azvirumbidze.
Kugamuchirwa kunyika yaMwari. Odisha kumirira kuuya kwako.